Faah faahin:- Dagaal qasaare culus ka dhashay oo saakay ka dhacay B/xaawo iyo sida ay haatan tahay xaaladda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal qasaare culus ka dhashay oo saakay ka dhacay B/xaawo iyo sida ay haatan tahay xaaladda
Waxaa faah faahin dheeraad ah kasoo baxaysaa dagaal culus oo saakay ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo, kaas oo sida la sheegay u dhaxeeyay maleeshiyo ka tirsan dadka degaanka iyo ciidan ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa taabacsan wasiirka amniga ee maamulkaas C/rashiid Janan.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay ku bilawday kadib markii maamulka Jubbaland uu magaalada B/xaawo u sameeyay maamul cusub, iyadoona maamulkaasi ay kasoo hor-jeesteen beesha maleeshiyadu ay kasoo jeedo islamarkaana uu dagaalka halkaasi ku bilawday.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa 4 qof oo isugu jiray dhinacyadii dagaalay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay ku dhawaad 10 kale oo labadaasi dhinac ka tirsan, waxaana haatan degan xaaladda magaalada B/xaawo oo saakay uu dagaalka ka dhacay.
Ciidanka maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay ilaa 10 ka mid ah maleeyshiyadii dagaalka la galay, iyadoona maamulka Jubbaland uu weli wax war ah kama soo saarin qasaaraaha dhimasho iyo dhaawac uu geystay dagaalka ka dhacay magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo.
Dhinaca kale, waxaa jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dagaal dhaco, maadaama ragga maleeshiyaadka ah ay wadaan is-uruursi islamarkaana laga qabsaday qaar ka mid ah ciidankoodi, inkastoo xaaladdu haatan tahay mid yara degan.